सहकर्मीसँग 'अफेयर'मा हुनुहुन्छ ? क्यारियर र जीवन नै धरापमा पर्ला नि !
जीवन शैली, फिचर पोस्ट
सहकर्मीसँग ‘अफेयर’मा हुनुहुन्छ ? क्यारियर र जीवन नै धरापमा पर्ला नि !
प्रेम सम्बन्ध गाँस्नु वा ‘अफेयर’ मा बस्नु गलत होइन । जीवनलाई रंगीन र रोमाञ्चक बनाउन समेत प्रेम सम्बन्धले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । तर आफू कार्यरत अफिस वा संगठनका कुनै सहकर्मीसँग प्रेम सम्बन्ध गाँस्दा वा ‘अफेयर’ चलाउँदा भने बेला-बेला समस्या पैदा हुन सक्छ ।
नेपालमा समेत आफ्नै सहकर्मीसँग प्रेम सम्बन्ध गाँस्नै प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसरी प्रेम सम्बन्ध वा ‘अफेयर’ चलाउनेको संख्या पनि पेशापिच्छे फरक पाइन्छ । होटेल, सूचना प्रविधि, बैंकिङ, स्वास्थ्यसंस्था तथा व्यापारिक संस्थामा काम गर्ने मानिसहरु सहकर्मीसँग ‘अफेयर’ चलाउने कुरामा अन्य पेशाभन्दा अगाडी देखिन्छन् ।
त्यस्तै विश्वका करिब ३९ प्रतिशत मानिसले जीवनमा एक पटक सहकर्मीसँग रोमान्स गरेको बताउँछन् । आफ्नै सहकर्मीसँग २ पटकसम्म ‘अफेयर’ चलाउनेको १७ प्रतिशत छ । यता आफ्नै बोस वा हाकिमसँग प्रेम सम्बन्ध गाँस्ने वा कुनै न कुनै खालको ‘अफेयर’मा रहनेको संख्या झण्डै १६ प्रतिशत छ । यसबाहेक, आफूभन्दा सिनियर सहकर्मीसँग सम्बन्ध गाँस्ने महिलाको संख्या ३६ प्रतिशत छ भने पुरुषको संख्या २१ प्रतिशत । र सहकर्मीको प्रेम सम्बन्धलाई वैवाहिक सम्बन्धमा परिणत गर्नेको संख्या विश्वभर झण्डै ३० प्रतिशत छ ।
यद्यपि, कहिलकाहीं कार्यालयका सहकर्मी वा अन्य कर्मचारीसँग ‘अफेयर’ चलाउँदा पारिवारिक जीवन मात्रै होइन, पेशागत जीवन समेत जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले यस्तो सम्बन्धले निम्त्याउन सक्ने जोखिमबारे यहाँ सानो चर्चा गरिएको छ :
१. क्यारियर नै धरापमा पर्न सक्छ
कार्यस्थल यस्तो स्थान हो जहाँ समान लक्ष्य र सोंच भएका मानिसले सहकार्य गर्छन् । यस क्रममा विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण बढ्नु स्वभाविक पनि हो । दुई जना सहकर्मी नजिकिँदै जाँदा यसले प्रेम सम्बन्धको रुप समेत लिन सक्छ । सहकर्मीबीच प्रेम हुनु आफैंमा खराब कुरा त होइन । तर कहिलकाहीं यही प्रेम सम्बन्ध टाउको दुखाइको विषय बन्न सक्छ । अन्य सहकर्मीबीच यसबारे हल्ला चल्न थालेपछि प्रेम सम्बन्ध नै तनावको कारण बन्न सक्छ । विभिन्न खालका हल्ला र चर्चाले गर्दा मानसिक तनाव बढ्न सक्छ । यसले गर्दा तपाईंको कार्य कुशलता र क्षमतामा ह्रास हुन जान्छ । र अन्त्यमा तपाईंको क्यारियर नै धरापमा पर्न सक्छ ।
२. कार्यालय कार्यस्थत हैन, प्रेम गर्ने क्रिडास्थल बन्छ
कुनै पनि कार्यालय वा संगठन निश्चित उद्देश्य लिएर स्थापना गरिएको हुन्छ । हरेक कार्यालयका आ-आफ्नै मूल्य, मान्यता र आचार संहिता हुने गर्छन् । यसको अर्थ कार्यालयमा साझा उद्देश्य र लक्ष्यले एकअर्कालाई जोड्ने गर्छ भन्ने हो । तर जब सहकर्मीबीच ‘अफेयर’ वा प्रेम सम्बन्ध हुन्छ तब संस्थागत लक्ष्य समेत प्रभावित हुने गर्छ । यदि तपाईंको प्रेम सम्बन्धका कारण संस्थाको गरिमा र उद्देश्यमा आँच आउन थाल्यो भने व्यवस्थापन र तपाईंबीच तीक्तता सुरु हुन्छ । यति मात्रै होइन, तपाईंको व्यवहारका कारण अन्य कर्मचारी समेत हौसिन पुग्छन् । र कार्यस्थल रोमान्स गर्ने क्रिडास्थलमा परिणत हुन पुग्छ ।
३. सहकर्मीसँग ‘अफेयर’ मा बस्नु समय र पैसा बरबाद गर्नु हो
कतिपय अवस्थामा हामीहरु काम वा कार्यव्यस्तताका कारण परिवारसँग टाढिन पुग्छौं । विशेषगरी विवाहित महिला/पुरुषले यस्तो व्यस्तताका कारण एकअर्काका लागि समय छुट्ट्याउन सक्दैनन् । यसले गर्दा दुबैजनाबीच असमझदारी र मनमुटाब बढ्न पुग्छ । यस्तो अवस्थामा दोस्रो व्यक्तिको साथ र हौसला खोज्नु स्वभाविक पनि हो । तर साथ र हौसलासँगै शारीरिक र भावनात्मक रुपमा नजिकिँदै जाँदा परिवारमा थप समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।
त्यस्तै आजभोली मोजमस्तीका लागि नै कतिपय सम्बन्ध गाँस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा क्षणिक आनन्दका लागि ‘अफेयर’मा बस्दा एकातिर पैसा खेर जान्छ । अर्कोतिर समय । यदि मोजमस्तीका लागि गाँसिने सम्बन्ध लामो समय चल्यो र पछि टुट्यो भने यसको प्रभाव निकै गम्भीर बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा हामीहरु कहिलेकाहीं ‘डिप्रेशन’को शिकार समेत बन्न सक्छौं । त्यसैले यस्तो सम्बन्धबाट टाढा बस्नु नै राम्रो होला ?
४. कामभन्दा सम्बन्धतिर बढी ध्यान जान्छ
‘डेटिङ’बिना खल्लो हुन्छ- आजभोलीको प्रेम सम्बन्ध । फुर्सदिला जोडीका लागि ‘डेटिङ’ जानु कुनै आइतबारको कुरा भएन । तर कार्यालयमा टुसाएको प्रेमलाई डेटिङमा बदल्न भनेर निकै कठिन हुने गर्छ । अर्थात्, काममा ध्यान दियो भने ‘डेटिङ’ छुट्ने र ‘डेटिङ’ गयो भने काम छुट्ने अवस्था आउने गर्छ । यदि बारम्बार ‘डेटिङ’ जाने बानी पर्‍यो भने कार्यालयमा अनुपस्थित हुने दर बढ्दै जान्छ । परिणामस्वरुप, यसले तपाईंको कार्य सम्पादन खस्कन्छ र अन्त्यमा जागिरबाट निस्कनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
५. निजी जीवन अस्तव्यस्त हुन सक्छ
अफिसमा काम गर्ने सहकर्मीसँगको प्रेम सम्बन्धले कहिलेकाहीं निजी जीवनलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ । कतिपयले प्रेमलाई प्रेरणाको स्रोत समेत भन्ने गर्छ । यो सत्य पनि हो । तर प्रेम सम्बन्धकै कारण तनाव उत्पन्न भयो भने निजी जीवन र पेशागत जीवनबीच असन्तुलन सिर्जना हुन्छ ।
६. अपराधी बन्ने कानुनी खतरा हुन्छ
कार्यालयमा हुने दुर्व्यवहारका कारण कतिपयको जीवन नै बर्वाद भएको छ । साँच्चै नै दुर्व्यवहारमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही हुनु राम्रो पनि हो । तर कहिलेकाहीं आफ्नै सहकर्मीमाथि प्रतिशोध लिने उद्देश्यले यस्तो आरोप लगाउने गरेका कैयौं उदाहरण पाइन्छन् । विशेषगरी प्रेम सम्बन्ध टुटेपछि आफ्नै सहकर्मीमाथि दुर्व्यवहारको झुठो आरोप लगाउने मानिसको संख्या विश्वभर नै बढिरहेको छ । तपाईं पनि झूठो आरोपको शिकार बन्नु होला नि ?
संसारलाई हँसाउने चार्ली च्याप्लिनको यस्तो छ अनौठो र पीडादायी जीवन कहानी
के गरिबी कसैको लागि मजाक हुन सक्छ ? चार्ली च्याप्लिनको रोचक प्रसंग
चिसो बढ्न थाल्यो, टन्नै पिउनुहोस् तातोपानी
गर्लफ्रेन्डको ‘चक्कर’ थाहा पाउनु छ ? हातको यो रेखा हेर्नुहोस्
महिलाहरुलाई यी ५ कुरा जति सुने पनि पुग्दैन !
यो हो संसारकै बहुमूल्य ढुंगा, तपाईंले देख्नुभएको छ ? (रोचक कथासहित)
प्रेम लत्याएर किन धन खोज्छन् प्रेमीप्रेमिकाहरु
‘धेरै सुत्ने महिलालाई बढी यौन चाहना’
फाइदा थापा पाएर खानुहोस् गोलभेँडा
जीवन शैली, स्वास्थ्य
चिसो मौसममा यस्ता फलफुलको सेवन गर्नु फाइदाजनक
संसारका धेरै देशमा फरक ढंगले मनाइन्छ दिपावली, कहाँ कसरी मनाइन्छ ?
मिठाई खाँदै हुनुहुन्छ ? खानुअघि जान्नुहोस् यी तथ्य
यी हुन् डरलाग्दो सपनाको समस्याबाट छुटकारा पाउने उपायहरु
यी हुन् हिँउदमा पाइने सब्जीका फाइदाहरु
फाटेको दूध फ्याक्नु पर्दैन, यसरी बनाउनुहोस सुन्दर कपाल र दागरहित छाला
दुई घण्टाभन्दा धेरै एउटै आसनमा बस्ने गर्नुभएको छ, यो शोधको नतिजाले तर्साउनेछ
एउटै राशीबीच वैवाहिक सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? यसो भन्छ ज्योतिषशास्त्र
जगिङ गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस्
यसकारण मुस्कान छर्नुहोस्
यस्ता छन् सेक्सपियरको नाटकमा चर्चित दश प्रेरणादायी संवादहरु
यस्ता थिए हिटलरलाई गान्धीको शान्ति अपिलका पत्रहरु